Fikambanana fitantanana seranan-tsambo any Afrika Atsinanana sy atsimon'i Afrika dia manitatra faravodilanitra ho an'ny Birao fizahantany afrikanina
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fikambanana fitantanana seranan-tsambo any Afrika Atsinanana sy atsimon'i Afrika dia manitatra faravodilanitra ho an'ny Birao fizahantany afrikanina
The Fikambanan'ny fitantanana seranan-tsambo any Afrika Atsinanana sy atsimony (PMAESA) miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny Firenena afrikanina 9 dia niditra ho mpikambana ao amin'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany anio. PMAESA dia fikambanana miankina amin'ny fanjakana tsy mitady tombombarotra miorina ao Mombasa, Kenya.
PMAESA dia mandrafitra ny minisiteran'ny governemanta, ny Operatera seranan-tsambo, ny lozisialy ary ny mpiray antoka amin'ny seranan-tsambo sy ny fandefasana avy any amin'ny faritra Atsinanana, Afrika atsimo ary ny Ranomasimbe Indiana Andrefana.
Ny tanjon'ny MAESA voalohany dia ny hanolotra sehatra iray hiarahan'ny mpandray anjara rehetra etsy ambony sy ny mpilalao an-dranomasina manan-danja hifanakalo sy hifampizara hevitra ankehitriny ao amin'ny orinasa.
Andre Ciseau, ny sekretera jeneralin'ny fikambanana dia nilaza hoe: "Ny fandraisantsika anjara amin'ny Birao Fizahan-tany any Afrika dia hanolotra ireo fikambanana roa hanana fifandraisana sy hizara fomba fanao tsara indrindra miaraka amin'ny tanjona hampivoatra ny kaontinanta Africa.
Nilaza ny filohan'ny komity fizahan-tany afrikanina Juergen Steinmetz. "Ny Fikambanana Port Management Association izay miditra amin'ny Birao Fizahan-tany any Afrika dia zava-dehibe ho an'ny anjaranao ary manokatra varavarana hanitarana ny faran'ny fiaraha-miasa. Miarahaba ny PMAESA eto amin'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany izahay. ”
Kenya Authority Ports
Overview Kenya Ports Authority (KPA) dia orinasam-panjakana eo ambany minisiteran'ny Fitaterana miaraka amin'ny andraikitra «mitazona, miasa, manatsara sy mifehy ny seranan-tsambo rehetra namboarina» manamorona ny morontsirak'i Kenya izay misy ny Seranan-tsambon'i Mombasa sy ireo seranan-tsambo kely hafa misy an'i Lamu, Malindi, Kilifi, Mtwapa, Kiunga, Shimoni, Funzi ary Vanga. Tompon'andraikitra amin'ny…Hamaky bebe kokoa
Fahefana any Seranana
Topimaso Ny fahefan'ny seranan-tsambo Tanzania (TPA) dia manana an'i Dar es salaam, Tanga, Mtwara Ports ary ny seranan-tsambo rehetra ao Tanzania. Ny fahefan'ny seranan-tsambo Tanzania dia naorina tamin'ny 15 aprily 2005 taorian'ny fanafoanana ny lalàna THA No. 12/77 sy ny fananganana ny lalàna TPA No. 17/2004. Mametraka sy mandrindra ny rafitry ny Harbour. Mandidy ny TPA:…Hamaky bebe kokoa
Orinasa fampandrosoana ny seranan-tsambo Maputo
Overview Maputo Port Development Company (Port Maputo) dia orinasa tsy miankina nasionaly, vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny Mozambican Railway Company (Caminhos de Ferro de Moçambique), Grindrod ary DP World. Tamin'ny 15 aprily 2003, nomena ny alalana Maputo ny seranan'i Maputo nandritra ny 15 taona, miaraka amin'ny safidy fanitarana…Hamaky bebe kokoa
Fahefana Maorisy amin'ny seranana
Overview Mauritius Ports Authority (MPA) dia napetraka teo ambanin'ny lalàna Ports 1998. Ny tanjon'ny MPA voalohany dia ny hanana ny fahefana nasionalin'ny seranan-tsambo mifehy sy mifehy ny sehatry ny seranan-tsambo ary manome serivisy an-dranomasina. Lehiben'ny mpanatanteraka Andriamatoa Shekur Suntah Fampitana entana ho an'ny karatra 2012: 7,075,186 taonina isan-taonan'ny fifamoivoizana 2012: 417,467 TEU ny vidin'ny seranana…Hamaky bebe kokoa
Ministeran'ny asa sy fitaterana ny repoblikan'i Oganda
Topy maso Ny minisiteran'ny Asa sy ny fitaterana (MoWT) ao amin'ny Repoblikan'i Oganda dia andrim-panjakana notendren'ny: Manomana, mamolavola ary mitazona fotodrafitrasa fitaterana ara-toekarena, mahomby ary mahomby; Mamolavola, mamolavola ary mitazona serivisy fitaterana ara-toekarena, mahomby sy mahomby amin'ny làlambe, lalamby, rano, rivotra ary fantsona; Tantano ny asa vaventy misy ny rafitry ny governemanta ary; Mandrosoa fenitra tsara…Hamaky bebe kokoa
Fahefana manam-pahefana any Namibiana
Ny Fahefana Seranan-tsambo Namibiana (Namport), miasa ho National Port Authority any Namibia nanomboka ny taona 1994, dia mitantana ny Port of Walvis Bay sy ny Port of Lüderitz. Ny Port of Walvis Bay dia miorina eo amin'ny morontsiraka andrefan'i Afrika ary manome lalana fitaterana mora sy haingana kokoa eo atsimon'i Afrika, Eropa ary Amerika….Hamaky bebe kokoa
Topy maso Ny Seranan'i Djibouti dia eo amin'ny fidirana atsimo mankany amin'ny Ranomasina Mena, eo amin'ny fihaonan'ireo làlam-pitaterana iraisam-pirenena lehibe mampitohy an'i Azia, Afrika ary Eropa. Ny seranan-tsambo dia fiviliana kely avy amin'ny làlam-barotra atsinanana-Andrefana lehibe ary manome tobim-paritra azo antoka amin'ny fitaterana sy famindrana entana. Nanomboka tamin'ny 1998, ny…Hamaky bebe kokoa
Ny Sea Ports Corporation (SPC) dia orinasam-panjakana mahaleo tena ao Sudan izay mifehy, manangana ary mitazona ny seranan-tsambo, seranan-tsambo ary jiro any Sudan. Ny orinasa dia naorin'ny governemanta Sudan tamin'ny 1974 mba ho mpandraharaha seranan-tsambo nasionaly sy fahefana amin'ny seranan-tsambo. SPC dia miasa sy mitantana ireto seranana manaraka ireto ao Sudan: Port Sudan Al…Hamaky bebe kokoa
Fahefana nasionalin'ny seranan-tsambo Transnet
Overview Transnet National Ports Authority (TNPA) dia fizarana iray an'ny Transnet Limited ary nomena andraikitra hifehy sy hitantana ireo seranana ara-barotra fito amin'ny morontsiraka afrikanina atsimo 2954km. Any amin'ny tendrony kontinanta afrikana no misy ny seranan-tsambon'i Afrika atsimo mba hanompoana ny morontsiraka atsinanana sy andrefana. Transnet National Ports…Hamaky bebe kokoa
Niorina tamin'ny taona 2018, ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany dia fikambanana iray izay eken'ny sehatra iraisam-pirenena noho izy mpihetsiketsika amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany sy ny fizahantany ka hatrany amin'ny faritra afrikanina.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa sy ho lasa fitsidihan'ny mpikambana www.africantourismboard.com
Fly-in Lodge dia handeha haka ski ski helikoptera amin'ny sehatra vaovao any Canada
Firenena iray, olona iray, Seychelles iray: fizahan-tany fa tsy misy miaramila